भारतमा कोरोना भयावह भएपछि नेपाली दुतावासले नेपालीका लागि जारी गर्यो यस्तो सूचना – Sapana Sanjal
April 27, 2021 244
भारतमा अहिले कोरोनाको महामारी डरलाग्दो छ । दिनहुँ ३ लाख बढी नागरिक संक्रमित भएका छन् । सयौं मानिसको मृ,त्यु भएको छ । रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरु पनि कोरोनाको जोखिममा छन् । केही नेपाल फर्कने क्रममा छन् भने केही भारतमै बसेका छन् । भारतमा कोरोना सुरु भएपछि नै भोकमरीमा पर्ने डरले धेरे नेपाली घर फर्किसकेका छन् ।
भारतमै रहेका नेपालीहरुका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै सतर्क रहन भनेको छ । त्यहाँ रहेका सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोनाको गति बढ्नुका साथै मृ त कको संख्या समेत बढेको अवस्थामा दूतावासले नेपाली प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेको हो ।
मंगलवार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित रहन आग्रह दुतावासले नेपालीलाई आग्रह गरेको हो। दूतावासले मास्कको प्रयोग गर्न, भिडभाडबाट टाढा रहन र आवश्यक काम परेमात्रै घरबाट बाहिरिन अनुरोध समेत गरेको छ।यस्तै, दूतावासले आपतकालिन अवस्थामा वा स्वास्थ्य उपचारको सिलसिलामा तत्काल कुनै कागजात आवश्यक परे ह्वाट्सएपबाट सेवा लिन सकिने समेत जनाएको छ। साथै स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएमा सहयोग र सहजीकरणका लागि ९१९२०५१९५००९ मा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
Prevदुलहा कोरोना संक्रमित भएपछि पीपीई लगाएर बिहे (भिडियो हेर्नुस्)
Nextकोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेकाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भावना ? (भिडियो हेर्नुस्